I-china smd3030 icala elinye lomthombo wemodyuli yemveliso yemveliso kunye nabathengisi | Huayuemei
smd3030 imodyuli esecaleni yomthombo wokukhanya
Umba Ikhefu le-LED Strip
Ukucaciswa 500 * 16.8 * 1.6mm
Ubungakanani be-LED I-SMD3030
I-LED yangaphakathi 10PCS
Lumen I-110LM / W.
Ukutshintsha kombala 2800-12000K (eyenziwe ngokwezifiso)
Jonga iAngle 160 °
Amandla 5w / iiPC
1. Ubushushu obuqhelekileyo bemibala yethu ngama-6500K okanye "Imini epholileyo". Sinokwenza ngokwezifiso ubushushu bombala ukuya kuthi ga kwaye kubandakanya i-3000K, i "White Warm", ukufezekisa ukujonga okufanelekileyo kwebhokisi yokukhanya. Senza uvavanyo lweqondo lobushushu ngombala wakho owukhethileyo ukuze kuqinisekiswe isisombululo sokukhanyisa esifanelekileyo xa usebenzisa ubushushu bemibala obuhleliweyo （2800-12000K, inokwenziwa ngokwezifiso）.
2. Ngezisombululo zethu ze-bespoke, unokulawula ubungakanani beebhokisi zakho zokukhanya ukutshintsha imeko yevenkile ngamaxesha ahlukeneyo emini. Nokuba isetyenziswa kwivenkile yonke okanye kumacandelo athile, ukukhanya okunganciphisiyo kunceda ekuvuseleleni imeko elungileyo kwivenkile yakho.
Lobushushu 3.Umbala, CRI, Ubungakanani ungenziwa ngemfuneko ngokwesicelo sakho. Inokuba lunciphiso ngesilawuli.
4. Samkela i-OEM ne-ODM ngokwesicelo sakho.
5. Ukubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nenkonzo efanelekileyo emva kokuthengisa.
6. Iwaranti yiminyaka emi-3. Lobushushu Working ngu -50 ℃ ~ 50 ℃.
7. Sinika abaxhasi bethu izinto eco-friendly kunye neemveliso.
Ifaka isicelo sokukhangisa ngelaphu ibhokisi ekhanyayo kunye nokwolulwa kweselfowuni, ikwasebenza nendawo yokugcina izinto, ihotele, iivenkile ezinkulu, indlela engaphantsi, isikhululo seenqwelomoya, isikhululo njl.
Egqithileyo matrix led backlit led strip
Okulandelayo: Ikhethini ekhokelela ekukhanyeni kwimodyuli ye-24v ye-dc yentengiso yangaphakathi
I-RGBW yeFlexible ye-LED yangasemva yePhaneli
Ukukhanya kwe-SMD5050 okungamanzi okungamanzi okukhokelwayo kwilaphu l ...
I-RGB + WW iPaneli ye-LED ethambileyo
Iphaneli ekhokelwa ngasemva engafaniyo
Imitha engama-3030 yemibala emibini ekhokelweyo